Valencia waxay la soo wareegtay gawaari cusub oo koronto ku shaqeeya | Cusbooneysiinta Cagaaran
Valencia waxay soo iibsataa gawaarida cusub ee korantada
Jarmal Portillo | | Gaaska gawaarida, Gawaarida korontada
Gawaarida korontada waa hub wanaagsan oo lagu yareeyo wasakheynta magaalooyinka masuulka ka ah gaadiidka. Sidaas darteed, 18 gawaari koronto oo cusub ah ayaa lagu soo daray raxankan gaadiidka ee Valencia.
Ma rabtaa inaad ogaato faa'iidooyinka gaariga korontada iyo sida ay u kordheen sanadihii la soo dhaafay?
1 Gawaarida cusub ee korantada ee Valencia
2 Hal-abuurnimo badan iyo joogtayn
Gawaarida cusub ee korantada ee Valencia
Xildhibaanka Isku-xidhka Biyaha Isku-xidhka ah, Vicent Sarrià, agaasimaha guud ee Global Omnium, Dionisio García Comín, iyo agaasimaha guud ee shirkadda 'IVACE', shirkadda Julia, ayaa ka qayb-galay soo bandhigida baabuurta cusub ee deegaanka ee ay shirkaddu ku isticmaali doonto Valencia.
Kuwani waa moodooyinka cusub ee 100% gawaarida korontada kaas oo bixiya waaritaanka iyo xushmeynta deegaanka ee jawigeenu u baahan yahay.
Waxaa jira dhimasho badan sanadkiiba oo wasakheynta hawadu ay kuqaado magaalooyinka sababo laxiriirta taraafikada wadooyinka iyo warshadaha. Kacdoonka gawaarida korontada ku shaqeeya wuxuu u bilaabmayaa si tartiib tartiib ah, laakiin si tartiib tartiib ah tan iyo markii lagu dhex daray magaalooyinka waa mid adag.
Moodooyinka lagu soo daray Valencia waa Renault Kangoo ZE iyo Zoe iyo ismaamulkoodu waa 240 iyo 400 kiiloomitir, siday u kala horreeyaan.
Hawlgalka saxda ah iyo sahlanaanta isticmaalka gawaaridan, 26 goobood oo dib-u-soo-buuxin ayaa lagu rakibay bartamaha Vara de Quart shirkadaha Emivasa iyo Global Omnium. Tani waxay muujineysaa in gawaarida korantada korontada laga yaabaa inay sii kordhaan sannadaha soo socda.
Waa lagama maarmaan in la kordhiyo tirada gawaarida korontada leh haddii aan rabno inaan yareyno qiiqa wasakheysan. Caafimaadka dhammaantood wuxuu ku jiraa gacmaheena, inkasta oo ay tahay shaqo adag oo hami leh.
Isbedelka Cimilada, sidaan ognahay, waa xaqiiqo inala wada saameyneysa adduunyada ilaa maxalliga. Sidaa darteed, Global Omnium wuxuu damacsan yahay inuu gacan ka geysto xalka xaaladdan saameyn doonta habka nolosheena iyo kheyraadka biyaha.
Dionisio García wuxuu carabka ku adkeeyay waxyaabaha soo socda:
"Waxaan marwalba cadeynay inaan nahay shirkad bulshada dhexdeeda ku lug leh, sidee bayna noqon kartaa hadii kale, waxaan sii wadeynaa soo jeedinta xalal wax ku kordhinaya wanaaggooda iyo isticmaalka gawaarida bey'ada ayaa kamid ah"
Si loo yareeyo saameynta wasakheynta iyo isbeddelka cimilada, helitaanka gawaaridan wareegga ayaa yareyn doonta qiiqa in ka badan 30 tan oo ah CO2 jawiga, ahaanshaha mid ka mid ah gaaska ka qayb qaata inta badan kululeynta adduunka.
Go'aankan waxaa sabab u ah istiraatiijiyadda shirkadaha ujeeddadeedu tahay tartiib tartiib ah loogu beddelo gawaarida naaftada iyo kuwa gaaska leh kuwo sii jira oo gacan ka geysta ilaalinta deegaanka.
Hal-abuurnimo badan iyo joogtayn
Global Omnium waxay ku daraysaa tikniyoolajiyadda cusub nooca gawaarida bey'ada ee aan yareynin waxqabadka laakiin taasi waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta deegaanka bulshada madax-bannaan ee Valencia.
Ilaa hadda, 33 gawaarida deegaanka ayaa lagu daray (13 LPG iyo 20 koronto), oo la qorsheynayo in lagu daro 15 kale sanadka dambe (4 LPG, 7 koronto iyo 4 isugeyn). Hindisahani wuxuu kordhiyaa joogtaynta wuxuuna dammaanad qaadayaa tayada deegaanka ee jiilalka soo socda, maaddaama sunta hawada ku jirta ay yaraatay
Noocan ah horumarka tikniyoolajiyadda, Valencia marwalba waxay xudun u ahayd. Ansixinta gawaarida korontada ku shaqeeya ee Valencia waxay ku dareysaa guulaha teknolojiyadda ee la gaadhay sannadihii la soo dhaafay. Tani waxay ka dhigeysaa Valencia magaalooyinkii ugu horreeyay ee ay ka go'an tahay sii wadista taraafikada waddooyinka.
Qayb ka mid ah macluumaadka taageeraya guushaan ayaa ah aqoonsiga warbixinta Innovation iyo City, oo ay daabacday Center For An Urban Future (CUF) iyo Wagner Innovation Labs, oo ka tirsan NYU Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, New York , halkaasoo akhriska fog ee mitirrada caqliga leh ee ay soo saartay Global Omnium, ee magaalada Valencia, uu u taagan yahay mid ka mid ah 15-ka cusub ee adduunka ugu muhiimsan, ee la qabtay sannadihii la soo dhaafay.
Sidaad arki karto, kor u kaca gawaarida korontada ayaa kusii dhowaanaysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Teknolojiyada cusub » Gawaarida korontada » Valencia waxay soo iibsataa gawaarida cusub ee korantada